Semalt Expert: Nahoana no Avotsotra Amin'ny Google Analytics Fanomezana Spam
Mampahatsiahy i Nik Chaykovskiy, ilay Semalt Senior Success Manager Manager, fa ny antontan'isa no fototry ny ankamaroan'ny fanentanana ara-barotra amin'ny Internet . Ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala sy ny mpandraharaha miankina dia miankina amin'ny fahaiza-manaon'ireo angona azo ampiasaina. Ny spam Google Analytics dia mitondra ny fifamoivoizana sandoka sy ny fitsidihana aterineto, ka mahatonga ny fampahalalana momba ny fifamoivoizana tsy marina - arredo ludoteche catania. Zava-dehibe ho an'ny olona ny manaisotra spam amin'ny anaran'ny Google Analytics. Ohatra, afaka mahazo fitsidihana maro avy amin'ny sehatra toy ny Darodar na Ilovevitality ianao.
Ny rindrambaiko Google Analytics dia mitaky fitsidihana amin'ny Internet izay tonga amin'ny tranokalanao avy amin'ny sehatra hafa. Amin'ny toe-javatra sasany, ny sasany amin'ireo tranonkala izay ahafahanao mihemotra dia mety hitarika fifamoivoizana. Ny fanamarinana spam dia mety ho ireto karazana roa ireto:
Fanamafisana avy amin'ny Ghost: Ny vohikala sy vohikala sasany dia mety hahazo ny GoogleID Google Analytics UAID. Izy ireo dia manoratra pejy mitsidika ny tontolon'ny GA. Na dia izany aza dia tsy miseho ho toy ny fitsidihana aterineto eo amin'ny sehatry ny solosaina misy anao. Miseho toy ny fitsangatsanganana ara-nofo ao amin'ny kaontinao GA ianao.
Spam bots: Amin'ny toe-javatra sasany, ireo mpitsidika tsy vahiny dia mety manindry ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao. Raha ny marina dia tsy fitsidihan'ny besinimaro ara-dalàna ireny.
Ny antony ao ambadiky ny spam Google Analytics
Manana fikasana maromaro ny fanafihana an-tsokosoko. Tahaka ny fotsy mainty hoditra SEO, spam dia fomba iray mandika ny ankamaroan'ny fitsipika mba hahatongavana amin'ny tanjona. Fitsidihana tranonkala toy ny:
Ny fanatanterahana ny malware. Tahaka ny fanafihana mahatsikaiky amin'ny aterineto, ny olona dia mametraka fampahalalana maloto amin'ny tranonkala mpifaninana. Azon'izy ireo atao koa ny manao heloka bevava toy ny fangalarana karatra amin'ny carte de crédit ary na mangalatra ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa aza. Ny Keyloggers dia afaka manamora ny heloka bevava toy ny mangalatra ny fampahalalam-bola.
Ireo mpitsoa-ponenana. Amin'ny toe-javatra sasany dia mitifitra ireo olona miditra amin'ny tranonkala hafa ireo fanafihana ireo. Izy ireo dia ireo orinasan-tseraseran'ny SEO izay manome voka-pifidianana haingana amin'ny fotoana fohy. Matetika izy ireo no mampiasa ny fitsidihana any amin'ny tranokalanao na ny pejy, fa tsy mivadika amin'ny fivarotana.
Namidy vokatra. Ny ankamaroan'ny fitsidihan'ny spam Google Analytics dia orinasa mikasa hivarotra zavatra. Amin'ny fidirana amin'ny mpanjifa an-tapitrisa maneran-tany, manantena izy ireo fa hisy olona iray hivadika ho fivarotana. Amin'ny farany, dia tsy mamoaka ny fampahalalana momba ny fifamoivoizana izy ireo rehefa miezaka mividy izy ireo.
Fa maninona ary ny fomba hamahana spam an'i Google Analytics
Ny fitsidihana aterineto amin'ny tranonkala dia mahatonga ny tranokala ho malahelo noho ny fahazoana ny metrics izay tsy atakalony amin'ny tetikady ara-barotra amin'ny aterineto. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mitombo ny fampahalalam-baovao izay tsy mifandraika amin'ny fomba ataon'ny orinasanao amin'ny Internet. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fampiharana ireo sivana spam ao amin'ny tabilao admin administaly Google dia afaka mitondra vahaolana amin'ny ankamaroan'ny fanafihana spam. Ohatra, ny sehatra spam toa an'i Darodar dia mety hahazo fahadisoana 403 izay midika fa tsy manana fahefana hijery ny tranonkalanao izy ireo. Ity sivana spam ity dia mety hampiasa ny spam amin'ny tranokalanao. Amin'ny tranga sasany, ny olona mandao ny code na ny .htaccess loharano eo amin'ny fototry ny sehatra. Ireo rakitra ireo dia afaka manakana ny mpikirakira tranokala toy ireo dom-spam.